Hormuud News Wednesday, April 25th, 2018 | 14:29
[Thursday, January 3rd, 13] :: Xisbiga Waddani Oo Xaflad Balaadhan Oo Uu Ku Dabaal Dagayo Ku Qabtay Magaalada Hargeysa+ Sawiro
Hargeysa (RH)-Xisbiga Mucaaradka ah ee Wadani ayaa maanta munaasibad balaadhan Oo Uu ugu Dabaaldagayo Guusha Uu ka gaadhay Doorashadii Golaha Degaanka Ee Dalka Somaliland ka Qabsoontay 28 November, 2012-ka ayaa Waxaa Uu Ku Qabsaday Hotel Maansoor ee Magaalada Hargeysa
Xafladan Oo ah U Dabaal Daga Guusha Xisbinimo Munaaasibadan Oo ahayd Mid Si Balaadhan Loo Soo Agaasimay ayaa Waxaa Ka Soo Qayb Galey Masuuliyiinta Sare ee Xisbiga Wadani Cuqaal Culima U Diin Dhalinyaro Haween iyo Marti Sharaf Kale Oo Tiro Badan :
Sheekh Maxamed Cali geedi Munaasibadan Oo Ugu Horayn Ka Hadley ayaa Waxaa Uu Ku Dheeraaday Qiimaha ay Nabad Galyadu leedahay Waxaanu Kula Dar dar May Bulshad Reer Somaliland in ay Halkaasi Ka Sii Wadaan Dadaalka iyo Sidii Wadanka Somaliland U Noqon lahaa Wadan la Aqoon San yahay Waxaanu yidhi:
“Waxaynu is waydiinaynaa maku socoonkarnaa sidii immiksa loo galay doorashadii waad arkayseen oo waxaynu nahay dad Muslim ah oo nabad-galyadu waa qaali waana waxaynu ku faanayno haddii aynu nahay Ummadda Somaliland. Waxaynu doonaynaa in Ictiraaf ka helno beesha Caalamka. Wali waxbadan ayaa dhiban.”Ayuu yidhi Sh.Maxamed Cali Geedi
Gudoomiyaha Gudiga Qaban Qaabada Xaflada Xasan Xuseen Maxamed (Codyare)Oo isna Madashaasi Ka Hadley ayaa Waxaa Uu Xusay in ay Xafladan Guusha Uu Xisbiga Wadani Ka Gaadhay Doorashadii Golaha Deegaanka in Guud ahaaba looga Dabaal Dagyo Gobolada Dalka Oo Dhan isla Markaana Waxaa Uu Tilmaamay in Xisbiga Wadani yahay Xisbi Mucaarid ah Waxaanu yidhi:“Waxaan salaamayaa marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan qiimaha badan ee aynu ugu dabaal dahayno Xisbiga. Waxa lamida iyadana Gobalada dalka oo looga dabaal dagaayo guusha uu gaadhay Xisbiga Waddani. Xisbigan Waddani waa Xisbi mucaarada waana ka ugu xooga badan. Talabaad waxaan salaam u dirayaa Guddigii qaban qaabada ee gobalada iyo Caasimada.”Sidaas ayuu yidhi Xasan Xuseen Codyare.
Waxaa isna Halkaasi Ka Hadley Xoghaya Guud Ee Xisbiga Waddani Maxamed Cabdillaahi Uurcade Waxaanu Sheegay in Uu aad Ugu Faraxsan yahay Guusha Xisbiga Waddani Ka Soo Hooyey Ka Qayb Galkii Doorashada Golaha Deegaanka Somaliland Waxaanu Mahadnaq Balaadhan U Soo Jeediyey Taageerayaasha Xisbiga Waddani Guda iyo Dibadba
“Xisbiga Waddani waxa uu u dabaal dagayaa guushii waynayd ee uu ka soo hooyay doorashada, waxaanu noqonayaa Xisbiga mucaaradka ah ee labaad ee Dalka. Waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanadii uga qayb-galay Golaha deegaanka intii soo baxday iyo intii hadhay. Waxaan leeyahay tageerayaasha Xisbiga Waddani ee gude iyo dibadba waxaanu ugu mahadnaqaynaa sida way nee ay u tagereen Xisbiga Waddani. Dadkii ku dhintay mudaharaadka waanu uga t6acsiyadaynaynaa intii ku dhaawacan tayna waxaan Illahay uga baryaynaa inuu shaafiyo.
Sidoo kale Uurcade waxa Uu ka hadlay tariikhda Xisbiga Waddani
“Waxa shirwaynihii Ururka lagu qabtay Magalaada Hargeysa Waxaana ka soo qayb-galay dhamaan tageerayaasha Xisbiga Waddani ee Gobalada iyo dalka oo dhan. Waxaanu ahaa Ururkii ugu horeeyay ee is diwaan galiyey. Waxaanu doorashada ka galay kaalimaha koobaad Gobalada Dalka. Waxa uu 120% ka helay Gobalada dalka oo dhan. Degmooyimka dhamaan doorashooyinku ay ka qabsoomeen oo ahaa 19 Degmo, waxa uu ka gaadhay Xisbiga Waddani guulo.Waxaan leeyahay Xisbiyada ka qaylinaaya labada Teetal ee Guddoomiyaha Xisbiga Waddani. Dhamaantayo Xisbiga Waddani waxa uu hiigsanayaa inuu talada dalka qabto.”ayaa Uu yidhi Uurcade
Maxamed Sidiiq Oo ah garabka dhalinyarada ee Xisbiga Waddani ayaa isaguna Goobtaasi Ka Hadley ayaa Waxaa Uu Hanbalyo U Direy Guud ahaanba Taageerayaasha Xisbiga Wadani Gaar ahaana Dhalinyaradii Ka Soo Qayb Gashay Hal Gankii Dheeraa ee Ka Mid Noqoshada Xisbinimada isla Markaana Maanta Xafladani loo Qabtay guusha uu gaadhay Xisbiga Waddaniga waxaanu yidhi. “Waxaan Hambalyo u dirayaa dhamaan dhalinyaradii ka soo qayb-qaadatay halgankii Xisbiga Waddani ee wakhtigii doorashada uu kujiray. Waxaan dardaaran u soo jeedinayaa dhalinyaradii guusha soo gaadhsiisay Xisbiga Waddani inuu xisbi Qaran u Gudbo Waddani. Dhamaan dadka Somaliland waxaan xasuusinayaa inuu Xisbiga Waddani yahay kii cadaalada iyo sinaanta ku hogaamin lahaa dalka Somaliland. “ayaa Uu yidhi Maxamed Sidiiq
Waxa kale oo shahaado sharaf la gundoonsiiyay Madaxda Xisbiga Waddani iyo xubnihii firfin coonaa ee door ka wayn ka soo qaatay xilligii Ololaha ee Xisbiga Waddani guulo badan gaadhsiiyay.’
Faadumo Cali Madar Oo iyana Halkaasi Ka Hadashay ayaa Waxay Tidhi:“Waxaan leeyahay shacabka Somaliland waad noo hiiliseen, waxaana rajeenayaa inaad marka labaadna aad siwacan noogu codayn doontaan. Nabad-galyada aynu ilaashano cidwalba masuul ayaa ka saran nabad-galyada. Dadka ugu badan ee deeqda bixiyay waxay ahaayeen dumar, isla markaana iyaga ayaa inta badan codka bixiyay haddana waxay heleen 10 xildhibaan, iyada oo lix ay ka soo baxeen Ururadii hadhay. Waxaan dhamaan asxaabta kula dardaarmayaa inaad wada-shaqaysaan. Waxaana dhamaan Salaan idiinka sidnaa Dadka qurba-jooga.”
Guddoomiye ku xigeenkii Ururkii Umadda C/rashiid Maxamed Cali ayaa Waxaa Uu Hanbalyo U Direy Xisbiga Wadani Waxaanu yidhi:“Marka u horeysa waxaan hambalyeynayaa aniga oo ku hadla afka Umadda,………Maanta ka hadli mayno wixii lagu soo gudbaye Somalidu waxa ay tidhaahdaa gar dabadeed gur gurac, waxaanan xisbiga ugu hamblayeynaa.
Mar labaadka waxaan la ilaabayn oo aanu ugu mahadnaqaynaa inuu yahay xisbiga Waddani yahay xisbigii u horeeyey ee noo yimid ee noo tacsiyeeyey noona sheegay inay xad gudubkii meel wanaagsan iska taagan, haddi wadani noo bilaabay garawshiyahaasi dhacay. Woxoogaa dhawr qof oo halkan soo kacay oo mucaaradadii aanu ka sugaynay
Guddoomiye ku xigenka Rays Aadan Cilmi Dhoolayare Oo isna Halkaasi Ka Hadalkooban Ka Soo Jeediyey ayaa Waxaa Uu Xusay in Wax Kasta ay Ka Wayntahay Danta Qaranku Mar walbana la Xasuunaado Waxaanu yidhi
“Waxaan halkan ka hambalyeynaa ururadii soo baxay, kolay marka tartan dhaco cid uunbaa ku guulaysata, waxaanu Uga Tanaasualay Danta Qaranka . anaga oo ah Ururka Rays oo aan ku hadlaayo afka Ururkii hadhay iyo Taageerayaashii sii “ayaa Uu yidhi Dhoola Yare
Waxaa isna Xafladaasi Ka Hadley:Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi Waxaanu Xusay in ay Xisbiyada Cusub Ku Soo Dhaweynayaan Garoonka Siyaasada
” Waxaanu leenahay Hanbalyo Hanbalyo Waxaanu Kugu Soo Dhaweynayana Garoonka Siyaasada u Soo Dhawaada ayaan idin leeyahay Waxaynu Soo Marnay Doorasho Xanaf Badan leh Oo Dhibato Dhaawacba inaga Soo Gaadhay Wll yaa Waxaan diiin Sheegayaa Xisbiyadan ay yihiin Ku Wii Umada Wax U Tari lahaa” ayaa Uu yidhi Muuse Biixi
Suldaan Axmed Daahir Oo isna Halkaasi Ka Hadley ayaa Waxaa Uu yidhi: Waxaan leeyahay Hanbalyo
“Anigoo Ku Hadleya Afka Salaadiinta Somaliland Waxaan leeyahay ilaahay Guusha Ha inoogu Sii Wado. Haddii mar aynu qaadanay dimquraadiyadii oo aynu ka tagnay Kitaabkii, waxaynu gaadhi la nahay dimquraadiyadiina. Waxaana dalkeena haysta mushkilad, mushkiladaasina waa qaadka. Waxaan leeyahay In Madaxweynuhu uu ku mahadsan yahay waxaanu uu balan qaaday inuu furaayo Ururda wuuna furay. Ninkii Suldaanka ahaa waa lagu soo dhex dhacay waxaana ku soo dhex dhacay dadkisii oo kala raacay ururada. Doorashooyinka ha lamideeyo oo dhaqaalaha ayaa inaga burburaaya oo dhaqankii ayaa xumaaday. Qabyaalada ha la aaso, waxaanu leenahay doorashooyinkii immika cashar aynu ku qaadan doorashadan Golaha Degaanka ee Immika. Aniga qaar ayaa igu yidhaahda Suldaankaasi waxa uu ka soo jeeda Urur hebel. ”ayaa Uu yidhi Suldaan Daahir
Gaba Gabadii Waxaa Halkaasi Ka Hadley Gudoomiyaha Xisbiga Waddani ahna Gudoomoyaha Golaha Wakiilada Somaliland C/raxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro)
Kaasi Oo Madashaasi Ka Jeediyey Qubad Dheer Oo Dhinacya Badan Taabanaysa
“Dhamaan waxaan marti sharafka ku salamayaa salaanta Islaamka. Waxa kale oo aan mar kale salamayaa dhamaan Madaxda ka soo qayb galay munaasibadan aynu ku xusayno guusha Xisbiga Waddani. Waxaan marka hore mahad u soo jeedinayaa Ilaahay, waxaan kale oo aan ku xigsiinayaa cidkasta oo u codaysay Xisbiga Waddani. Waxa kale oo aan u mahadnaqayaa Xildhibaanadii hadhay iyo kuwii soo baxay waxaan leeyahay waxaanu ku fanaynaa waa codkinii,. Waxaanu u mahadnaqaynaa dhamaan tageeryaashii xildhibaanada Golaha Degaanka is ka sharaxay waddani. Guusha Xisbiga Waddani u soo hooyatay waa codkiniin maaha cod rooxaan noogu yimi. Waxaanu u mahadnaqaynaa dhamaan Degaanada dalka Somaliland. Waxaanu dhamaan u mahadnaqaynaa shacabka reer Somaliland. Wallaal waxa Waddani u codeeyay l;abada Xisbi qaran.
‘Waxaanu halkan tacsi uga diraynaa laba marxuun oo nagu qaali ahaa oo intii aanu ku jirnay halganka 165.
“Tageerayaashayada waxaanu u sheegaynaa inuu Xisbiga Waddani yahay mucaarad. Madaxweynaha Saxiib ayaanu nahay iyo Muuse Biixi. Waxaanu soo bandhigi doonaa siyaasad cad oo aanu u sheegayno xukuumada wixii khalada. Waxaanu dhamaan aqoonyahanka u sheegaynaa inuu Waddani yahay madal la is kugu imanaayo. Waxa soo baxay Xisbiyo Qaran
“Xisbiyada soo baxay qaar waxaad moodaa inay caytamaan oo ay shahaado u helaan inay .
Waxa jira qodobo dastuurka ku qeexan oo aan l aisku qaban Karin, qaranku waxa uu ka kooban yahay sadex waaxood sharci dejin, garsoor iyo fulin, waxaanay cadeeyeen inay kala madax banana yihin, ninka maanta wasiir noqda waxa sharci ah inuu iska casilo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,su’aal baa jirta ay dadka xisanayay ay ku wareereen, guddoomiyaha golaha wakiiladu xaq ma u leeyahay inay qabsadaan xisbi, sanadbay loyara qabsadeen , waxa ay u tageen xisbiyada waxa ay yidhaahdeen meel la isku hayn karo ma hayno, laakiin waxa ku qoran sharciga Somaliland inaan guddoomiye xisbi laba jeer wax ka badan guddoomiye xisbi noqon Karin, waxa jira dad xeerka jabiyey oo sadex jeer guddoomiye isku sharaxay , waxaan u sheegayaa oo waad iska wada garanaysaan baan u malaynayaa, qolada diiwaangalintu waxa ay lahaayeen xisbiyada waxaanu ku ilaalinaynaa inay sharciga ilaaliyaan, ninbaa sadex jeer guddoomiye isku sharaxay sadexda jeerba Hargeysa ayaa lagu doortay, waxaan u malaynayaa saaxiibkay guddoomiye Faysal dastuurka wuu ka soo waayey, barigii hore waxa ku jirtay ah kaliya, waxaan u sheegayaa ah kalena inaan ku darayo, guddoomiyaha golaha wakiilada, ahna guddoomiyaha waddani ahna musharax madaxweyne.
Kalmad baan ku darayaa silsilad xaydha la yidhaahdo ayaa jiri jirtay oo niman isku deegaan ah ayaa soo dhex galay, dabadeedna nin kale ayaa soo dhex galay oo guuleed xawaashe ayaa soo dhex o……….waxaan saaxiibkay Jamaal u sheegayaa in uu arinkaasi ku xiiqay sanad dabadeedna cid ka nasisa ayuu doon doonayo Jamaal ayuu igu yidhi iga nasi, laakiin Jamaal mar kale waan la taliyey oo waxaan ku idhi qori nin kale cabeeyey ha ku xiiqin, waxaanan u sheegayaa arin niin kale ku xiiqay iskaga tag.
Xisbiga UCID waa xisbi mucaarid ah waxa la doonayaa in cida uu mucaaridka ku noqonayo inuu garto, waad soo yara deg degteene mucaaradadiinu waxa ay ahayd inaad mucaaradaan Muuse Biixi iyo saaxiibkay Axmed Siilaanyo oo labadeena waxa la inga rabay inayynu isku kaashano.
Walaalayaal waxaan ku darayaa intaasi laba kalmadooda ta koowaad wax weyeen nabadgelyada oo badeecad qudha ayayenu iibinaa oo waxa qudha ee aynu haysanaa waa nabadgelyada, waxa aynu galnay doorasho waxa ka soo baxay qaladaad badan, waxa ka soo baxay markaanu qiimaynay……….Kim.. maamul xumo baahsan, taasi oo lumisay kalsoonidii shacabka, waxa kale oo cabasho badani ka soo baxday markii la dooranayey maamulada goleyaasha deegaanka in xukuumadda Somaliland farogalisay, waxa aynu u baahanahay inaynu hagaajino,,,,,,,waxa inagaga dhintay dad, qaar kalena way inagaga dhaawacmeen, waxaan ILAAHEY ka baryayaa inay…….maanta waxa aynu dooranay goleyaal deegaan wax aynu u baahanahay in aynu fursad siino……..waxa aynu u baahanahay in garsoorka la tayeeyo oo…..siyaasada arrimaha dibada wadani axa uu aaminsan yahay in siyaasada arrimaha dibada u tahay tir dhexaad, xukuumadda Somaliland waxa looga baahan yahay inay ibo bixiso siyaasad cad oo lagu……dawlad waxa ay ku dhismaan cashuurta muwaadin kasta waxa ku waajibaya inuu cashuurta ku waajibtay iska bixiyo, waxa loo baahan yahay inaynu samayno nidaam maalgashiga hirgalinaya, waxa aynu u baahanahay inaynu siyaasad lacageed samayno, waxa aanu xukuumadda u soo jeedinaynaa inay samayso nidaam dhaqaale oo lagu horumariyo dalka,, dawladduhu waxa ay ku can yihiin inay wax kala iibsadaan laakiin inaga Somaliland waxa aynu Itoobiya ka iibsanaa Jaad badan, waxa aynu u baahanahay inay samayno wixii aynu u iib gayn lahayn, waxa aynu u baahanahay inaynu samayno nidaam shaqo loogu sameeyo dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaysa nidaam shaqo loogu sameeyo, waxa aynu u baahanahay inaynu samayno nidaam aynu ku horumarino dalkeena.ayaa” Uu yidhi Gudoomiye Ciro